Rom Dark Night 5.5 ICS Android 4.0.4 ho an'ny Samsung Galaxy S | Androidsis
Androany no hanolorako anao izao asa mahavariana an'ny mpahandro izao Nasif.
Avy any xdadevelopers, Entiko aminao ity rom ity mifototra amin'ny firmwareAndroid 4.0.4, miorina amin'ny fananganana ny Ekipa Kang, ary ao anatin'izany ny safidim-panafarana mahazatra ny rôman'ity ekipa mpanao sinoa malaza ity.
Mahatsiaro tena milamina sy milamina tsara ity rom ity Samsung Galaxy S, ny fitambaran'ny fototry ny Ekipa Kang, miaraka amin'ny Kernel Devoly 1.1.6b, ataovy izay hahatonga ny zava-bitany sy ny asany hangeja ny faran'izay avo indrindra azo ampiasaina amin'ny fitaovantsika, satria izy no iray amin'ireo asa tsara indrindra sy sarobidy indrindra amin'ny lafiny Sandwich gilasy ho an'ny terminal.
Raha te hiasa amin'ny fomba marina ity rom ity ary tsy manome antsika hadisoana toy ny fanakatonana fangatahana an-tery, tokony hapetraka izy avy amin'ny firmware firmware ary a fomba famafana madio tanteraka.
1 Rom endri-javatra
2 Fanomanana ny Samsung Galaxy S
3 Dingana fametrahana Rom
Araka ny efa nolazaiko teo am-piandohan'ny lahatsoratra, ity rom ity dia noforonin'i Nasif, ary nangona avy tamin'ny asan'ny Ekipa Kang,(AOKP):
Toerana Android 4.0.4.
Rom tena haingana sy mafy orina.
Tsy misy karazana lag.
Fakan-tsary amin'ny fampisehoana feno ary miaraka amin'ny fanohanana feno amin'ny fandraisam-peo 720p. ary zoom.
Kernel Devoly 1.1.6b_BFS_BLN_CMC.
Fanohanana ho init.d
Busibox napetraka ary havaozina amin'ny kinova farany.
Fiainana bateria lava kokoa, satria ny kinova 4.0.4 dia manafoana ny bibikely avy amin'ny Android taloha.
Nampidirina ny Widgets tao amin'ny ridao fampandrenesana.
Fanatsarana ny GPS.
Hafainganam-pandeha mihombo tokoa rehefa mandefa rakitra amin'ny alàlan'ny usb.
Fanomanana ny Samsung Galaxy S
Mametraka an'ity rom ity, ary araka ny nolazaiko anao tany am-piandohana, hanomboka amin'ny fametrahana madio isika ary avy amin'ny fototra JVU Stock.
Ny batterie an'ny terminal misy antsika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny habetsaky ny fatrany avo indrindra, raha tsy izany dia amporisihiko ianao alohan'ny hanombohana ny fizotry ny fametrahana dia andoavanao izany 100 X 100.
Toy izany koa, tsy maintsy nampavitrika ny Famafana USB, satria io dia afaka manafaka antsika amin'ny tsy fahafaliana sasany noho ny iray hafa.
Dingana fametrahana Rom
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ampidino ny pejy rom an'ny xdadevelopers, raha vao sintonina dia alaintsika izy nefa tsy decompressing ny fototry ny fahatsiarovana anatiny ny fitaovana ary afaka mamono ny Samsung Galaxy S hanohy hamadika azy amin'ny maody Recovery.
Ireo dingana tokony harahina avy amin'ny Recovery dia izao manaraka izao:
Hamafa laza / hamerina am-boalohany.
Mandrosoa / hamafana cache cache dalvik.
Miverina, hiverina amin'ny efijery fanarenana lehibe.
Misafidiana zip avy amin'ny sdcard anatiny, amin'ity dingana ity dia mandeha amin'ny zip ny rom izahay ary manamafy ny fametrahana azy.
Atsaharo ny rafitra ankehitriny.
Amin'izany no hananantsika ny asa manaitra an'ny Nasif napetraka tsara ao amin'ny Samsung Galaxy S, azo atao izany amin'ny voalohany mifandrambondrambona apetraka fotsiny ny Kernel Rom, ho tsapantsika izany, satria ny fitaovantsika dia hijanona ao anaty loop tsy tapaka eo amin'ny efijery boot, hamahana azy io dia tsy hiditra ao amin'ny Recovery fotsiny isika apetraho ny rom amin'ny dingana faha-5.
Fanazavana fanampiny - Samsung Galaxy S, ny fomba fametrahana Rom amin'ny fomba madio, Samsung Galaxy S, havaozina amin'ny alàlan'ny odin mankany amin'ny firmware 2.3.6 sy ny CF Root
Ampidino - Rom Dark Knight 5.5
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S, Rom Dark Knight 5.5
Moa ve mifanaraka amin'ny maodely i9000b?
Valiny tamin'i Walter
Eny, tsy hitako izay holazaiko aminao, tsy afaka nanamarina izany manokana aho, saingy misy ireo mpampiasa maneho izany.
vargascondarcoerick dia hoy izy:
Milamina amin'ny GT-i9000T misaotra atte: fantsona
Valiny tamin'i Vargascondarcoerick
Aitor Isaoglu dia hoy izy:
mifanaraka amin'ny Samsumg Galaxy S2 ve izany?
Valiny tamin'i Aitor Isaoglu
Tsia, samy manana ny Roms ny terminal.
Bline hodd dia hoy izy:
ROM mahaliana, fa .. mandeha ve ny radio FM? Fanjifana bateria? : p
Mamaly an'i Bline Hodd
Ny radio FM dia tsy mandeha amin'ny ICS rehetra, fa manana Fanahy kosa ianao izay manao io asa io ihany, amin'ny resaka fanjifana bateria dia mifandraika amin'ny fampiasana omenao azy io, fa manodidina ny haavon'ny ICS rehetra kosa.
Omg, tsy misy ICS? : S ratsy xD. Ilay Fanahy heveriko fa raha tsy mandeha amin'ny radio anatiny io dia hampiasa TDD, sa tsy izany?
Misaotra ny valiny Francisco
Ny fanahy dia mampiasa fomba mitovy amin'ny radio FM, mila manitsy ny masontsivana fotsiny ianao.
Maka dia hoy izy:
Eny, mandeha be izy io ary toa tena tsara fa manana olana roa aho ... Amin'ny lafiny iray, ny famindrana angon-drakitra dia tsy mandeha intsony rehefa afaka kelikely (indraindray 15 minitra, indraindray adiny iray rehefa omena azy) sy ny sisa ny ankilany tsy afaka mametraka ringtone tsy misy mp3 aho. MISAOTRA
Valiny amin'i Opas
Izay rehetra tsy maintsy alaminao avy amin'ny rom Control
Efa voavahaiko ireo hira mp3, mila nanova ny toerana misy azy ireo ho lasa folder «Rigntones» aho ary dia izay. Namboarina ho ahy ny zavatra fifamoivoizana, toa izao fotsiny…. Enga anie ka hiasa foana io ary tsy hijanona eo fotsiny. Fa manana olana vaovao aho izao:
-Mba milaza amiko izy fa manana habaka kapila kely sisa tavela aho rehefa tsy marina izany, manana efitrano malalaka malalaka mihoatra ny 3 aho fa tsy mamela ahy hametraka rindranasa bebe kokoa ary mahazo fampandrenesana maharitra ao amin'ny bara fampandrenesana milaza fa saika tsy misy toerana intsony ……. Nikaroka forum maro aho ary tsy mahita vahaolana satria ny sasany miresaka momba ny fizarazarana ny karatra na zavatra toa izany ary ny hafa kosa milaza fa miaraka amin'ny ICS dia tsy mila mizara na inona na inona ianao ... somary very aho.
-Manana olana ihany koa aho fa tsy manisy marika tsara ny mari-pamantarana ny batery, dia manomboka amin'ny 100% ka hatramin'ny 85% hatramin'ny 50% ka hatramin'ny 43% ary avy eo tsy misy fanondroana ireo isa manelanelana ... Fantatro fa tsy dia matotra loatra ity farany fa izaho sosotra aho fa tsy fantatro hoe ohatrinona ny bateria sisa tavela….
Djoscarbass dia hoy izy:
Tsy afaka manana fifandraisana Internet aho raha tsy misy wifi. Napetrako ny data voaforona ary hitako ny fikirana apn ary milamina izy ireo. Tsy haiko ny antony. Misy hevitra ve?
Mamaly an'i Djoscarbass
Ao anatin'ny APN dia tsy maintsy ajanonao ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny boaty boribory eo akaikin'ny famaritana.
Enzogms dia hoy izy:
Manana olana mitovy amin'i Djoscarbass aho, nataoko izay nolazainao fa tsy nisy ... Tsy haiko raha manana signal 3G aho - tsy miantso video ny ICS?
Valiny amin'ny Enzogms
Tokony hanova ny modem ianao, mety tsy mandeha amin'ny faritra misy anao ny iray tonga tampoka ao amin'ny rom.
azoko atao ve ny mametraka modem jvo miaraka amin'ny mofo-mofo? manana zavatra azonao sintonina sy andramana ve aho? Any Uruguay aho
Manana olana mitovy aminao aho, nahita vahaolana ve ianao?
jgn30d dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha azo apetraka ao amin'ny Samsung Galaxy S Plus ity rom ity?
Mamaly an'i jgn30d
Tsia, ny terminal tsirairay dia samy manana ny firafiny sy ny fitaovany tsy mitovy.
FW23 dia hoy izy:
Misy mahalala ve raha azo atao ny mampiditra modem hafa amin'ity ROM ity?
Ny maody maodelin'ity ROM ity dia tsy mandeha amiko loatra toa ilay nananako tao amin'ny Gingerbread (JVO Modem). Heveriko fa noho ny faritra ara-jeografika (ny karazana modem tsirairay dia miasa tsara kokoa amin'ny faritra sasany). Talohan'ny niarahako tamin'i Darky Rom 2.3.6 Gingerbread ary azo atao ny mampandeha modem, saingy efa nanandrana izany avy amin'ny CWM aho ary manome fahadisoana izany amiko.
Misy mahalala zavatra momba izany? MISAOTRA
Valiny amin'ny FW23
Raha azo atao, amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho entiko aminao ny modem ported an'ny Galay Nexus ary hazavaiko ny fizotran'ny fametrahana.
Grimaud_92 dia hoy izy:
azo apetraka amin'ny galaxy s samsung galaxy. ?????????
Mamaly an'i Grimaud_92
Raha ny maodelin'ny GT-I9000 dia eny.
Jose Ricardo Barrera Vazquez dia hoy izy:
Napetraka ao amin'ny SGS Vibrant GT-959 T-Mobile
Ary miasa tanteraka ...
Etsy andaniny ... Tokony hampahatsiahivinao ny mpampiasa mba hamafana ny toetoetran'ny bateria aorian'ny fametrahana azy ...
Valiny tamin'i Jose Ricardo Barrera Vazquez
Xolo35 dia hoy izy:
Salama, tsara tarehy sy mahafehy tsara.
fa ... mitsambikimbikina foana aho, nijanona ny fizotran'ny android.process.media, nanidy ny fakantsary, ny galeriana, tsy afaka nametaka feonkira na fampandrenesana aho ary nanidy ny lalao. Ankoatr'izay, tsy mandeha ny gmail.
Raha manana hevitra handaminana azy ianao, satria tena tiako ilay rom.
Izany dia satria tsy nanao fametrahana madio ianao, avereno alefa amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana amin'ity lesona ity:
Efa namboariko tamin'ny titane izy izao, tsy mandeha ny gmail.ideas ??
Ampidiro ny fampiharana ary manaova angona mazava, esory ny cache ary esory akaiky, avy eo avereno ny terminal.
Misy zavatra tsy mazava amiko
Manana ny sgs aho, android android 2.3.3
Tokony hanao karazana fihenam-bidy alohan'ny hametrahana ity kinova android ity ianao na azonao atao mivantana
Afaka manao izany tanteraka ianao.
Vao avy nanavao azy io tamin'ny alàlan'ny kies aho ary tsy mazava amiko fa fametrahana madio
caperazuni23 dia hoy izy:
Salama namana, manana ahiahy kely momba ity efitrano ity aho. Nanova ny Rom ho samsung galaxy s ho an'ny knight mainty 5.5 sy 4.0.4 aho nefa manome ahy olana maro, mihamangatsiaka ny écran rehefa te-hanokatra programa aho. (tsy isaky ny), indraindray miverina indray izy io, matetika dia milaza amiko izy fa tsy mamaly ilay programa hoe raha te-hanidy azy aho, rehefa misy antso tonga dia mivaingana ary tsy mamela ahy hamaly (izy ireo koa indraindray ), ary tsia fantatro izay tokony hatao. Raha misy afaka manome ahy tariby azafady, tiako be izany. Izaho dia manana faka kinova 2.3.6 miorim-paka
Mamaly an'i caperazuni23
Ataovy ny hamafana telo ary hamerina hametraka ny ROM ...
xtremepoint dia hoy izy:
ry namako satria ny SGS i900 tsy miseho ilay:
Advanced / mamafa cache cache dalvik. ?? misy hevitra ve ??
Mamaly an'i Xtremepoint
Io safidy io dia ao anatin'ny fanarenana novaina ary tonga amin'ny fanarenana rehetra.
Manana ClockWork MOD ve ianao ???
Yader Bassil Canahuati Trundle dia hoy izy:
Salama daholo, manana Galaxy S i9000T aho ary te-hametraka an'ity rom ity fa tsy azoko raha mila manana zavatra hafa napetraka aho, efa Root aho fa tsy nanao bebe kokoa tamin'ny telefaona, misy ny kinova 2.3.3 fa napetrako tao amin'ny Kies de There tsy nanao zavatra hafa aho, izany hoe hanomboka amin'ny fametrahana madio sy ny base Stock JVU izahay. Tsy manana an'izany aho, angamba misy horonan-tsary manampy ahy izy ireo, misaotra betsaka mialoha
Valiny tamin'i Yader Bassil Canahuati Trundle
Tsy maintsy apetrakao ny fanarenana nohavaozina, fantatra kokoa amin'ny hoe ClockworkMod Recovery.
Azonao atao ve ny manome ahy horonantsary na zavatra hitarika ahy hanao izany amin'ny Galaxy S, tsy misy olana amin'ny famaranana ahy ho i9000T? Misaotra anao
hahaha dia hoy izy:
Javierventura 1911 dia hoy izy:
Samsung Galaxy S, havaozina amin'ny alàlan'ny odin mankany amin'ny firmware 2.3.6 sy ny CF Root
Ny tutorial izay asehonay etsy ambany, ny fomba fanavaozana ny Galaxy S amin'ny alàlan'ny Odin mankany amin'ny firmware 2.3.6 sy ny Root mifandraika amin'izany, dia hanompo, ankoatry ny zavatra hafa, hametraka ny ClockWorkmod Recovery ao amin'ny GT-I9000, hahafahantsika avy eo apetraho izay Rom novaina rehetra ary havaozina ho an'ny terminal.
Ny zavatra voalohany tokony hizahantsika dia raha afaka miditra amin'ny maody fampidinana ny Galaxy S, noho izany ary hiala tanteraka ny terminal dia hivadibadiky ny bokotra manaraka, bokotra Vol + + bokotra an-trano + bokotra herinaratra, hoterenay izy ireo miaraka amin'izay ary tsy mamoaka azy ireo mandra-pisehoan'ny efijery toa izao:
Fomba fampidinana fidirana
Raha izany dia ho vonona hametraka ny rindrambaiko JVU amin'ny Android 2.3.6 isika amin'ny fampiasana fitaovana iray izay ho lasa fototra sy ilaina amin'ny Android, ny fitaovana dia tsy iza fa i Odin ho an'ny Windows.
Raha hivoaka ny maody fampidinana, ny sisa ataonao dia ny manindry ny bokotra herinaratra mandritra ny folo segondra, na, raha tsy mahavita izany dia esory ny bateria mandritra ny dimy segondra ary avereno ao.
Miomana amin'ny fametrahana
Ataovy ao an-tsaina fa amin'ny fanarahana ireo dingana ato amin'ity lesona ity dia tsy maintsy miantsoroka ny andraikitra rehetra amin'ny mety hitranga amin'ny fitaovanao ianao, raha manaraka ny torolàlana eto ianao dia tsy tokony hisy zavatra ratsy hitranga, fa mieritrereta fa isaky ny miditra amin'ny rafitra anatiny an'ny Misy atahorana ny Galaxy raha tsy manao zavatra araka ny torolalana isika.
Toy izany koa, alohan'ny hanombohana ity fampianarana ity dia tsy maintsy manana 100% ny baterian'ny terminal anao.
Tsy maintsy apetrakao tsara ao amin'ny PC ny mpamily rehetra, raha toa ka manana Kies napetraka ianao ary nanatontosa tsara ny terminal anao amin'ny fotoana rehetra, dia efa manana ny mpamily ilaina apetraka ianao, raha tsy izany dia mankanesa ao amin'ny tranokala Samsung ofisialy ary sintomy ny farany kinova ofisialin'ity programa ity ary apetraho ary ampifanaraho ny fitaovanao.
Kies fandaharana ofisialy Samsung
Ny zavatra voalohany hataontsika raha vantany vao nanamarina fa afaka miditra amin'ny maody fampidinana izahay, dia ny mampidina ireo rakitra rehetra ilaina hanatanterahana an'ity tutorial ity amin'ny fomba mahomby, satria io dia ampifandraisinay amin'ireo rohy Odin ho an'ny Windows sy ilay ofisialy. JVU Firmware sy ny Root CF mifandraika amin'izany.
Ity ny rohy mankany amin'ny fisie tena ilaina antsoina hoe Pit 512, izay tena ilaina amin'ny fampandehanana ny Galaxy amin'ny alàlan'ny Odin, mazàna dia ao anatin'ny takelaka Firmware na CF Root izany, saingy indraindray aho nahita ny tsy nampoizina fa tsy nisy io rakitra ilaina io apetaho tsirairay izy mba hitahirizanao azy soa aman-tsara.
Raha vantany vao alaina ny rakitra rehetra, dia hofehezinay rehetra amin'ny toerany ao amin'ny solosainay izay tena tianay indrindra, manoro hevitra anao aho mba hamorona fampirimana vaovao eo amin'ny birao ary esory izy rehetra ao anatiny, afa-tsy ny fisie farany, satria tsy voafintina.
Amin'ity dingana ity dia handeha amin'ny menio an'ny Galaxy S izahay ary hampandeha ny deboka Usb, izay hita ao amin'ireto lalana manaraka ireto: Menu / Settings / Applications / Development.
Raha vantany vao vita izany rehetra izany dia afaka manavao ny Galaxy S mankany amin'ny kinova 2.3.6 amin'ny alàlan'ny Odin isika ary mametraka ny Root CF mifanaraka aminy.
Fomba fametrahana firmware
Voalohany indrindra dia hojerentsika fa nakatona tanteraka i Kies, noho izany dia hosokafantsika ny mpitantana ny Windows ary hamarana ny dingana rehetra misy ifandraisany amin'i Kies, hijery fotsiny ny anaran'ireo fizotra misokatra rehetra, raha misy ny teny hoe Kies any amin'ny toerana hafa hanidy azy koa.
Hanao ny programa Odin izahay izao ary haseho antsika ny varavarankely toa izao:
Efijery an-trano Odin
Aorian'izay dia apetratsika ao amin'ny folder Firmware ireto manaraka ireto:
 Hametraka ny fisie Pit izay ampidinintsika farany amin'ny bokotra mitovy anarana amin'izany, noho izany dia tsindrio ny PIT ary -navigate mankany amin'ny làlana izay itehirizantsika azy teo aloha.
 Ao amin'ny bokotra PDA dia hametraka ny fisie Code an'ny firmware tsy misy zip
 Ao amin'ny bokotra PHONE no hametrahantsika ny rakitra MODEM
 Ao amin'ny bokotra CSC dia hisafidy ny rakitra antsoina hoe CSC isika
Hamarininay fa ny boaty karazana lisitra Check-list eo ankavia dia voamariky ny safidy Re-Partition, Auto Reboot ary F. Reset Time.
Raha mila fiarovana bebe kokoa dia zahao ity sary niraikitra etsy ambany ity:
Toy izao no tokony hijeren'i Odin anao
Raha vantany vao voamarina ny zava-drehetra dia hofongorantsika tanteraka ny Galaxy, ary hodinihintsika amin'ny alàlan'ny fitambaran'ireo bokotra voalaza etsy ambony amin'ny maody Download, hampifandraisintsika amin'ny PC izy io ary hizaha ny efijery Odin izay nekeny. marina izany, noho izany dia hasehony antsika ny teny hoe COM arahin'isa maromaro eo amin'ny ankavia ambony ihany.
Tsy hanery fotsiny ny bokotra Start isika ary tsy hikasika na inona na inona mandra-pahatapitry ny fizotrany ary eo amin'ny ilany havia ambony dia mitatitra ny teny hoe Pass, mandeha tsy milaza fa tsy tokony hanao izany isika, mandritra io dingana io dia esory ny telefaona na inona na inona toe-javatra misy, ary koa manakana ny solosaintsika tsy handeha hatory, hibernation na toy izany.
Afaka maharitra dimy minitra ny fizotrany. Mandra-pahitantsika ilay teny hoe PASS dia tsy mikasika na inona na inona, raha vao omena ny Pass isika dia afaka mampifandray ny telefaona amin'ny solosaina ary miandry azy io hiverina.
Fomba fametrahana CF Root
Amin'ny dingana teo aloha dia efa manana ny fanavaozana ny Galaxy tsara sy miasa tanteraka amin'ny Android kinova 2.3.6 ianao, amin'ity dingana manaraka ity, dia hatokinay amin'ny alàlan'io fitaovana io ihany koa ny fametrahana Kernel manokana miaraka amin'ny Root sy ClockWorkmod Recovery napetraka.
Aorian'ity fizotran-javatra ity dia hanana ny Galaxy vonona hametraka Rom mifanentana amin'ny alàlan'ny fanarenana voaova isika.
Hosokafantsika indray i Odin, raha efa nosokafantsika izy io teo aloha, dia hakatonay sy hosokafantsika indray, amin'ity indray mitoraka ity dia apetraka ao anaty ny folder Root CF, ao amin'ny faritra PDA ao Odin, ary tsy hisafidy izay fisie misimisy kokoa
Hamarininay fa ny Re-Partition dia tsy voamarika amin'ity indray mitoraka ity, ny safidy roa hafa dia tokony hofidina, ka tsy isalasalana fa mampiditra sary ny endrika tokony hijerena ny zava-drehetra amin'ity indray mitoraka ity aho:
Raha vantany vao nanamarina izahay fa ny zava-drehetra dia toy ny amin'ny sary niraikitra, hakatonay ny Galaxy ary hodiantsika indray amin'ny maody Download, raha vantany vao mirehitra isika dia hampifandraisintsika amin'ny PC ary homentsika ny safidy Start ny Odin varavarankely
Amin'ity indray mitoraka ity dia ho latsaky ny iray minitra ny fizotrany, raha vantany vao averin'i Odin ny teny hoe Pass dia afaka manafoana ny telefaonintsika amin'ny solosaina isika ary miandry azy io hiverina.
Amin'izany no hananantsika Roteado, ny fanovana namboarina sy nohavaozina amin'ny kinova Android 2.3.6.
Araho hatrany ireo famoahana vaovao satria hanolotra anao ny Romana tsara indrindra ho an'ny fitaovantsika aho, na ny Gingerbread na ny Ice Cream Sandwich farany teo amin'ny android 4.0.
Fampahalalana bebe kokoa - Samsung dia tsy hanavao ny Galaxy S amin'ny fonosana sarobidy
Ampidino - Kies, Odin, Firmware, CFRoot, Pit 512.
Ity rom ity dia tsy natao ho an'ny fitaovanao fa an'ny I9000
Alleniz dia hoy izy:
Ampio aho zazalahy, nametraka ilay ROM izay ho an'ny Samsung galaxy S Vibrant… aho dia 5.0.5 ary tsindrio ny bokotra volume + sy - ary ny bokotra fanidiana ary mahazo efijery maitso aho. rehefa tonga amin'ilay fanavaozana Ampiharo amin'ny dingana SD Card aho dia mahazo hafatra milaza hoe E: Tsy nahomby ny fanamarinana sonia. INONA NO ATAONAO?
Valiny tamin'i Alenniz
ahiahy dia hoy izy:
Azafady fa manana olana aho, nataoko daholo izay voalaza ao amin'ilay lesona, tsy misy olana miseho fa mamafa ireo rakitra ao amin'ny galeria aho ary nanjavona izy ireo, novonoiko ny terminal, averiko io ary eo indray ireo rakitra, efa nanao zavatra tsy mety?
Crixuz gore dia hoy izy:
Salama, ahoana no nataoko tamin'ny fanovana ny sela mba hanampiana ireo dingana voalohany voalaza ao amin'ity lesona ity fotsiny, fa ny olako dia misintona ny telefaona ary misy bara manga kely izay tsy nandeha nandritra ny adiny iray. Ary nakatoniko ny odin ary natokana aho namerina ilay solosaina sy ny bateria kite tamin'ny gt i9000t izay ananako fa izao dia tsy mamela ahy hiditra amin'ny fomba fanarenana intsony ary rehefa averiko indray ilay odin ary ataoko ireo dingana fa ao anaty baiko ihany io. sbl.bin ary avy eo tsy misy mandroso. Efa nanandrana nampifandray azy tamin'ny kies aho ary tsy nahafantatra ahy koa izy io. Fanamarihana lehibe dia nanaraka ny dingana rehetra mankany amin'ilay taratasy aho ary na dia izany aza dia tsy nahomby aho
Valiny tamin'i Crixuz Gore
Ity dia ho an'ny Galaxy S, maodely GT-I9000
Tamin'ny 23 Novambra 2012 03:51 maraina, Disqus nanoratra hoe:
Juan Manuel Contreras dia hoy izy:
Raha azo atao, raha mbola afaka miditra amin'ny maody fampidinana finday ianao dia manana galaxy s i900T ary na dia nanana olana aza aho satria efa nosakanana ity rakitra sbl.bin ity ary nomena ahy ny telefaona tao anatin'ny 10 minitra I nahita ny vahaolana ary apetaho ity kinova ity izay mandeha tsara fa tsy misy olana.
Mamaly an'i juan manuel Contreras
Menon Ayala dia hoy izy:
Ahoana no namahanao ilay namana biriky? Tafahitsoka ao aho, tsy mandalo ilay rakitra sbl.bin, lazao ahy izay azoko atao!
Valiny tamin'i Menon Ayala
hoziell dia hoy izy:
Azoko an-tsaina izany ary nahavita namaha ny olana ianao, sa tsy izany?
Mamaly an'i hoziell
Adonay28 dia hoy izy:
miasa amin'ny i9000T ??
Valiny tamin'i Adonay28
Fcocastillo R dia hoy izy:
Ahoana no hametrahako ny fanamboarana? Misaotra anao.
Valiny tamin'i Fcocastillo R
Ry namana ato amin'ity rom ity, ahoana no fomba hametrahako ny WIFI AP sy ny onjam-peo, safidy azoko ampiasaina izy ireo ary rehefa manavao azy io amin'ity kinova ity aho dia tsy mety amiko.
Mitadiava kinova vaovao, io rom io dia efa lany andro.
Na izany aza, haharitra anao ny zavatra radio satria tsy misy kinova ofisialy momba azy na ho an'ny ICS na ho an'ny JB
Mbola tsy misy kinova ofisialy ho an'ny fitaovana sasany ...
Ny roms ho an'ny telefaona sasany dia seranan-tserasera hafa ...
Izany no mahatonga ny lesoka ...
frera dia hoy izy:
Salama tsara fa nametraka an'ity kinova ity tamin'ny findaiko aho saingy milaza amiko isaky ny nijanona ny fizotry ny haino aman-jery android ahoana no fomba hamahako azy? Misaotra anao
Valiny tamin'i Frairos
Nestor Adrian Luna dia hoy izy:
ho an'ny samsung S advance ilaina ity rom ity
Valiny tamin'i Nestor Adrian Luna
Salama, ahoana no nataoko tamin'ny fanovana ny sela mba hanampiana ireo dingana voalohany voalaza ao amin'ity lesona ity fotsiny, fa ny olako dia misintona ny telefaona ary misy bara manga kely izay tsy nandeha adiny iray. Ary nakatoniko ny odin ary natokana aho namerina ilay solosaina sy ny bateria kite tamin'ny gt i9000t izay ananako saingy izao dia tsy mamela ahy hiditra amin'ny fomba fanarenana intsony ary rehefa averiko indray ilay odin ary ataoko ireo dingana dia baiko fotsiny sbl.bin ary avy eo tsy misy mandroso. Efa nanandrana nampifandray azy tamin'ny kies aho ary tsy nahafantatra ahy koa izy io, mety misy mahalala hoe ahoana no ahafahako manamboatra azy. Fanamarihana lehibe dia nanaraka ny dingana rehetra mankany amin'ilay taratasy aho ary na dia izany aza dia tsy nahomby aho
Salama, ny zava-drehetra napetraka tsy misy olana amin'izao fotoana izao, afa-tsy ny olana sasany
ny tamba-jotra izay manapaka ary mangataka ahy hampihetsika ny angona amin'ny roaming
hampiasa ny fonosana angon-drakitra, saingy nitranga tamiko izany tamin'ny fotoana hafa ary vita izany
famahana. Tuto tsara
Saingy, fanontaniana iray, ahoana no hametrahako ny fanamboarana? eo amin'ny pejy nisy ny ROM dia milaza izy ireo fa hametraka fanamboarana, manome ireto torolàlana ireto izy ireo:
Ampidiro aloha ny rom rom voalohany, mankanesa any amin'ny Rom control / Start-up Tweaks. Avelao alalana ny superuser. Avy eo Ampidiro io fanamboarana io.
fa mihoatra ny famelana ny fidirana amin'ny faka dia tsy azoko
Zavatra kely iray hafa, heveriko fa ny tsy fahombiazan'ny tambajotra dia vokatry ny modem, fantatro
olona iray avy amina modem mifanentana amin'ity ROM ity na zavatra hafa hamahana ahy
ny olana? Avy any Espana aho, misaotra
Jese dia hoy izy:
Ahoana no fomba hahitako ny 3G amin'ny fanavaozana ity?
Mamaly an'i jesse
Ity rom ity dia efa lany daty, mitady izay misy ankehitriny kokoa, amin'ny Androidsis dia manana maro ianao ohatra ny iray izay tena mandeha tsara dia ny RC2 avy any elitemovil.
Eo am-panaovana izany aho ary milaza amiko amin'ny hafatra E: tsy nahomby ny fanamarinana ny sonia. INONA NO ATAONAO? Misy olona manampy ahy. Ny mailako: alenniz_alvarado327@yahoo.com
Salama, aorian'ny famafana ny takelaka siragon 4n azoko dia misy hadisoana milaza fa "nijanona ny fampiharana ny fanaingoana ota" ary tsy manomboka izany, afaka manampy ahy ve ianao ???
Mamaly an'i patricia
Abdel dia hoy izy:
Ny samsung s plus no. Aza mitondra intsony ary. Tsy mandeha amin'ny fomba fampidirako azy io
Valiny ho an'ny mpifindra monina